ऋणको बोझले त्रिशूलीमा ..प्रत्यक्ष देख्नेले दियिन चकित पार्ने बयान - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ऋणको बोझले त्रिशूलीमा ..प्रत्यक्ष देख्नेले दियिन चकित पार्ने बयान
80,3003minutes read
काठमाडौं / धादिङ : काठमाडौं चन्द्रागिरी–४ थानकोटमा २० वर्षदेखि बस्दै आएका ३५ वर्षीय विनय लामिछाने केही दिनदेखि तनावमा थिए। स्थायी घर मकवानपुर चित्लाङ भएका विनयले शिक्षण पेसा छाडेर अनलाइनमार्फत व्यापार गर्दै आएका थिए। त्यसबाट नाफा नभएपछि ऋण थपियो। ऋणको बोझ थेग्न नसकेपछि उनले बिहीबार गलत बाटो रोजे। त्यही घटनामा उनले पत्नी जमुनालाई गुमाएनन् मात्रै, दुई नाबालक छोरा ६ र २२ महिनाका नदीमा बेपत्ता भए।
जमुना रेग्मीको शव निकालिएको ठाउँमा घटना मुचुल्का बनाउँदै प्रहरी र आफन्त। तस्बिर : मनीष दुवाडी
घटनाको अनुसन्धानका लागि विनय गजुरी प्रहरीको हिरासतमा छन्। ‘उनीहरू योजनाबद्ध तरिकाले आत्महत्या गर्न निस्किएका रहेछन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रेग्मीले भने, ‘सुरुमा बच्चालाई छाडेरै जाने सल्लाह गरे पनि आफूहरू नरहेपछि बच्चाको बिचल्ली हुने सोचेर उनीहरूसहित आत्महत्याको प्रयास गरेको विनयले प्रहरीलाई बताएका छन्।’ उनीहरू कसरी आत्महत्या गर्न बाध्य भए र त्यसको पछाडि अरू के–के कारण थिए भनेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
विनयले सुरुमा आफू मात्रै आत्महत्या गर्ने योजना पत्नीलाई सुनाएका थिए। जमुनाले ‘सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएको’ भन्दै आफू पनि आत्महत्या गर्ने अडान लिइन्। विनयले ‘दुई अबोध बालकलाई कसले हेर्ने ? तिमी त बाँच्नुपर्छ’ भने पनि जमुनाले मानिनन्। विनयले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार जेठो छोरो आफूले च्यापे भने कान्छो जमुनाले।
सुसाइड नोटसँगै उनीहरू आफूले ऋण तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई रकमसहितको सूचीका साथै आफ्नो मृत्युपछिको किरिया खर्चसमेत छाडेको पाइएको छ। विनयले घरमा रहेका ९६ वर्षीय हजुरबुवालाई सम्बोधन गर्दै माफ गरिदिन पनि लेखेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।
विनयले व्यवसाय गर्दा लागेको ऋण तिर्र्नै नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने धादिङका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले बताए। ‘उनले ऋण लिएका व्यक्तिहरू को–को हुन् ? तिनीहरूले कसरी ऋण दिएका थिए ? त्यो पनि हामी अनुसन्धान गर्दै छौं’, उनले भने, ‘बजारमा अहिले मिटरब्याजका कारण पनि यो घटना भएको हल्ला चलेको छ। त्यसैले विनयले बनाएको सूचीलाई हामीले गोप्य राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
विनयले अनलाइनमार्फत व्यापार÷व्यवसाय गर्ने गरेको तर यति धेरै ऋण गरेको र घाटा लागेको भन्ने आफूले थाहा नपाएको छिमेकी श्रीराम लामिछानेले सुनाए। बेपत्ता भएका दुई नाबालकको खोजीका लागि बेनीघाट आए श्रीरामले भने, ‘मिटरब्याजको कुरा त केही थाहा पाएका छैनौं तर ऋण लागेको भने रहेछ।’
म आफू काम गर्ने रिसोर्टमा त्रिशूलीको साइडतर्फ बसिरहेको थिएँ। एक्कासि झोलुंगे पुलमा केही मान्छे ‘मान्छे बगायो, मान्छे बगायो’ भनेर चिच्याइरहेको सुनें। म कायक चालक भएकाले हत्तपत्त कायक लिएर नदीमा पसिहालें। केही तल मान्छे बगाएको देखेपछि कायकलाई त्यतै लगें।
केटा मान्छे होसमै थियो। केटी मान्छेको खुट्टा समाउँदै सँगै बग्दै रहेछन्। मैले मेरो कायकमा समाउन लगाएँ। केटी मान्छेलाई आफैं समातेर पाखामा ल्याएँ। उनीहरूलाई बाहिर ल्याउँदा केटी मान्छे बेहोस थिइन्। सायद उनको मृत्यु भइसकेको थियो। उनीहरूलाई पाखा ल्याएपछि मात्रै दुई बच्चा पनि थियो भन्ने थाहा पाएँ। मैले नदीमा भने देखिनँ। पुलमा बस्नेहरूले बच्चा पनि बगेको देखेका रहेछन्। अलिक तलसम्म त पुगेर खोजी गर्‍यौं तर बच्चा फेला पार्न सकिएन। (बेनीघाटका कायक चालक श्रेष्ठसँग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानी)
होटलमा दिनहुँ सयौं मान्छे आउँछन्–जान्छन्। को कहाँको कता जान लागेको भने केही पनि सोधिनँ। एकछिनपछि ‘मान्छे बगायो–बगायो’ भन्ने हल्लाखल्ला आयो। मेरी बहिनीका छोराहरू कायक चलाउँथे। हत्तपत्त उनीहरू कायक लिएर दगुरे। केही बेर तल पुगेपछि केटाहरूले बूढाबूढीलाई समातेर निकालेछन्। बच्चाहरू फेला परेनन्। उनीहरू त्यही दम्पती रहेछन्, केही बेरअघि यही बसेर बच्चालाई दूध खुवाएर गएका थिए। (भक्कानिँदै) पानीमा ती बच्चाहरूलाई कस्तो भयो होला ? कति निसास्सिए होलान् ? बरु बच्चा यही छाडेर गइएको भए मै पालिदिन्थें।(बाँदरे मोडमा होटल सञ्चालक वदनकुमारी श्रेष्ठसँगको कुराकानी)
महरा कारागार चलान : अदालतले दियो कैद सजाय